ညီလင်းသစ်: မှန်ပြောင်းထဲက ကျွန်းကလေး
Posted by ညီလင်းသစ် au 31.1.12
Pls written JAPAN ISLAND .Myanmar many peoples working in japan.
ခြင်္သေ့ကျွန်းလေးဟာ လေ့လာစရာတွေ တပုံကြီးနဲ့ပါ.. ကိုညီလင်းသစ်ရေ... အခွင့်ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ သွားလေ့လာကြရအောင်..း))
ရောက်အောင်သွား ကိုညီရေ..တခါတလေ ရန်ကုန်လို့ တောင် ထင်မိတယ်
ကျေးဇူးပါ မောင်ညီလင်းရေ။ မကြာခနသွားဖူးနေပေမဲ့
စင်္ကာပူအကြောင်းကို သိသင့်သလောက်သိနေလည်း ဒီပို့စ်လေးနဲ့ တမျိုးစိတ်ကူးယဉ်မိတယ်။ ကျွန်မလည်းမရောက်ဖူးသေးဘူး။
သူငယ်ချင်းတွေနေနေကြတယ် သူတို့တွေထဲက ဂျပန်ကိုလာဖူးနေဖူးတဲ့သူတွေ နှိုင်းယှဉ်ပြတဲ့အထဲက မြန်မာအစားအစာနဲ့မြန်မာလူမျိုးများတာ လူမျိုးခြားပေါင်းစုံအတူရှိနေတာ၊ ကလေးတွေအတွက်ပညာရေးစံနစ်ကောင်းတာတွေကို ကြားရတာ သိပ်ကိုအားကျမိတယ်။
ကိုညီလင်း စာရေးကောင်းတော့ ဖတ်ရတဲ့သူတွေ အဆင်ပြေတယ်
ကျွန်မလဲအဲဒီလိုရေးတတ်ချင်တယ် ခုတော့ပေါက်ကရ ကဗျာတွေနဲ့ နဘမ်းသတ်နေရတဲ့ဘ၀ပါပဲ-----
အခုလို ဖိတ်ခေါ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမရေ..၊ အခုတစ်ခေါက်လည်း ချန်ဂီကနေပဲ ခရီးဆက်ရဦးမှာ ပါပဲ၊း)
ပြောလို့မရဘူး၊ ကွေးသောလက် မဆန့်မီ၊ ဆန့်သောလက် မကွေးမီလေ...၊
I'd love to but don't know much about Japan. :(
တစ်နေ့တော့ ဖြစ်လာနိုင်မယ့် အဲဒီအခွင့်အရေးကို ကျနော်လည်း စောင့်နေတာ ပါပဲဗျာ...၊
အဲ့ဒီလောက်တောင် ပဲလားဗျာ..၊ ရန်ကုန်က သူ့ကိုယ်သူ back up လုပ်ထားတာ ကျနော်တောင် မသိလိုက်ဘူး၊း)
ကျနော်လည်းအခု အဲဒီကျွန်းကို စာအုပ်တွေထဲက ကျော်ပြီး သိချင်နေမိပါတယ်..၊
မ,ကောင်းမွန်လည်း မရောက်ဖူးသေးဘူးကိုး..၊ သား နည်းနည်းကြီးလာတော့ သိပ်မကြာခင် သွားလည်လို့ ရပြီပေါ့..၊ သွားဖြစ်ရင် ပြောပါဦး၊ လူကြုံမှာချင်လို့..၊း)
ဒီလိုပါပဲဗျာ..၊ စာတွေဖတ်၊ စိတ်ကူးတည့်သလို ရေးကြည့်နဲ့ လုပ်နေတာပါပဲ...၊ ကဗျာတွေကို သေချာ ရေးနိုင်မယ်ဆိုရင် နည်းတဲ့ပါရမီ မဟုတ်ဘူးဗျ...။း)
ခုတော့ စင်္ကာပူအကြောင်းကို အတော်လေးသိလိုက်ရပါတယ်ဗျာ
ရှင်ကျားပူ ကျွန်းလေးအကြောင်းကို ရှင်ကြားပူရောက်
အာဂန္တုတစ်ယောက်က ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံး နဲ့ဖတ်သွားတယ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ နံပတ်တစ်တဲ့အကိုရ....၊ဒီကျွန်းလေးကို သူ
တို့တွေက fine city လို့ခေါ်ကြလေရဲ့....။အဆင့်မြင့်
ရသလို နေရာတကာဖိုင်းတွေတပ်လွန်းလို့ fine city
စိတ်ဝင်စားလို့ အလည်တစ်ခေါက် ရောက်ချင်စမ်းပါဘိ အကို..:):)
ကိုညီလင်းသစ်က စာအရေးကောင်းတော့ ကျွန်းကလေးက အဝေးမြင်ပေမဲ့ ပီပီပြင်ပြင် ရုပ်လုံးကြွလာသလိုပဲ။ တစ်ခါမှမရောက်ဖူးပေမယ့် အလည်အပတ်သဘောမျိုး သွားကြည့်ချင်ရုံကလွဲပြီးတော့ အဲဒီမှာ အလုပ်အကိုင်နဲ့ သွားရောက်အခြေချနေထိုင်ဖို့တော့ လုံးဝစိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူး။ စက်ရုပ်ဆန်တဲ့လူနေမှုစံနစ်မျိုးကြီးထဲမှာလဲ တာရှည်နေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်မိဘူး။ ကိုညီလင်းသစ်ပုံဖေါ်ထားတဲ့ ကျွန်းကလေးအကြောင်း ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ တိတိကျကျ အမည်မတပ် တတ်ပေမဲ့ တစ်စုံတစ်ရာစိတ်ခံစားမှုကို ဖြစ်လာစေခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲ...း) သွားမနေချင်တဲ့စိတ်ကတော့ ပိုခိုင်မာလာသလို ခံစားရတယ်။
ရေးထားတာလေး ကောင်းလိုက်တာ... စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ရောက်နေပေမယ့် အစ်ကို့ လောက်တောင် စင်ကာပူ အကြောင်းကို မသိဘူး။ ဒီမှာက မြန်မာများတော့ မြန်မာအစားအစာက အားလုံးလိုလိုကို ရတယ်။ အစ်ကို အလည်လာဖြစ်ရင် အကြောင်းကြား ကျွန်တော် လာကြိုမယ်။ ကျွန်တော်က လေယောဉ်ကွင်းနဲ့ နီးတယ်လေ...
စင်ကာပူမှာ လူတိုင်း အိုင်ဖုန်းကိုင်နိုင်တယ်...
ဒါပေမယ့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း အရမ်းကွာဟမှု ရှိတယ်...
နာမည်ကြီး တံဆိပ်ကောင်းကောင်း သုံးပြီး လှချင်တိုင်း လှနေပေမယ့် မမြင်ရတဲ့ ပေါင်မှာတော့ ၀ဲကလေး တစက်နှစ်စက်ပေါက်နေတဲ့ အိနြေ္ဒကြီးတဲ့ မိန်းမချောလေးနဲ့ တူတယ်...
I won't praise your writing asalong time and regular reader of your blog.Sg ofcourse attracts us cos of our people who lives and runs on it.I also like you many time just transit and never been into it.This time may be different transit for me.Hope to taste Sg when we've chance.
ကိုညီရေ သြဂုတ်လထဲရောက်ဖြစ်မယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်
Fine city လို့ခေါ်တာ ကျနော်လည်း ကြားဖူးတယ်ဗျ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ image ကို နိုင်ငံသား တစ်ဦးချင်းရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ လဲလိုက်ရတဲ့ သဘောလို့ ဆိုရမလား မသိဘူးနော်...၊
ညီမလည်း အလည်သွားချင် သူပေပဲလား...၊း)
မြန်မာပြည်လည်း အခု စင်္ကာပူကို အမှီလိုက်မယ် ဆိုလား၊ ပြောနေကြတယ် မဟုတ်လား ညီမရဲ့...၊း)
စင်္ကာပူမှာတော့ မအိမ်သူ မကြာခဏ တင်တတ်တဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေထဲကလို မြန်မာပြည် ကျေးလက်နဲ့ ဆင်တဲ့ ရှုခင်းမျိုးတွေ သိပ်တွေ့ရမယ် မထင်ဘူးနော်၊း)
လာကြိုမယ်ဆိုတော့ အဆင်သင့်လိုက်တာဗျာ..၊ မဒိုးကန် တစ်ယောက်နဲ့ ကိုညီရဲ့ တစ်ယောက်တော့ ရပြီ..၊း)
အိုင်ဖုန်းဆိုလို့ စင်္ကာပူက လူ ၁၀၀ မှာ ဖုန်း ၁၄၁ လုံးရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ဆိုလား.. ဖတ်လိုက်ရပါသေးတယ်၊ စင်္ကာပူကို ပေးတဲ့ ဥပမာတော့ ကြိုက်သွားပြီဗျို့..၊း)
Aw.. you are alsoaS'pore-longing-for person like me. :) From here, we find many interesting air tickets discount quite often. So why not soon? :)
အားကျတယ်ဗျို့..၊ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်လာခဲ့ဗျာ..နော။း)
အလည်လာစမ်းပါရှင်။ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။
စလုံးကတော့ ဟောင်ကောင်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက် အဖွင့်နဲ့တိုက်ပြီး အချိန်တောင် တစ်နာရီစောထားတာ။
မနက်စောစောထကျင့်ရအောင် ကလေးတွေကျောင်းကို မနက်အစောချိန် လုပ်ထားတာ။
ကလေးတွေအတွက် တွေးတတ်အောင် brain stroming လုပ်ပေးတဲ့ ကစားနည်းတွေ တီဗီအစီအစဉ်မှာ
လာဘ်စားမှုနည်းအောင် အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကို လောက်ငှအောင် ပေးထားတာ။
တစ်ခြားကောင်းကွက်တွေလည်း အများကြီး ရှိဦးမှာပါ။
အင်း ဆိုးတာတွေလည်း ရှိသပေါ့။ ဒါကတော့ ဘယ်နေရာမဆို ရှိနေမှာပါပဲလေ နော်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေကို အရည်အချင်း ရှိရင် ရှိသလို နေရာပေး၊ အလုပ် လုပ်ကိုင်စေတာမို့
ကျေးဇူးတင်မိတာပါပဲ။ မြန်မာပြည်နဲ့လည်း အိမ်ဦးကြမ်းပြင် လွန်းထိုးနေနိူင်တာမို့ နေပျော်ပါတယ်လေ။
ဒါပေမဲ့ အသက်ကြီးလာရင်တော့ ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေဆီပဲ ပြန်ချင်တယ်ရှင့်....။
ဘယ်နိုင်ငံမှ မရောက်ဘူးသေးတဲ့ ရွှေစင်ဦး ကတော့ ရောက်ချင်နေတယ် ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်
အဲ့ဒီကျွန်းကလေးကတော့ နာမည်တွေ ဟုန်းဟုန်းတောက်လို့ပေါ့ ကျနော်လည်း သွားလည်ချင်သေးတယ် ဒါပေမယ့် အစ်ကိုပြောသလို တံခါးကြီးက ပိတ်ထားတယ်ဗျး))
သောင်းရင်း ကမ်းနဖူးက လုံချည်ဝတ် ၊ ကွမ်းယာလည်းရောင်းတဲ့ မြို့ငယ်လေးကလည်း လာသမျှဧည့်သည်ကို ကြိုဆိုနေမယ်ထင်ပါ့ဗျာ ။
အကောင်းအဆိုးကတော့ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ရှိနေမယ်ထင်တယ်။ စကာင်္ပူရဲ့ သန့်ရှင်းမှု၊ လူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်မားမှု၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ စည်းကမ်းရှိမှုတွေကိုတော့ စာတွေ့နဲ့ သိနေပြီးသားမို့ အခါအခွင့်ကြုံရင်ဖြင့် တစ်ခေါက်လောက် အရောက်သွားချင်မိပါသေးတယ်။
ခြင်္သေ့နိုင်ငံရောက် ကျွန်းသူတစ်ယောက် ဖတ်အပြီး ပြုံးပြုံးကြီး ဖြစ်သွားလေရဲ့။ အခွင့်အခါသင့်လို့ ဝင်လည်ဖြစ်ရင် အကြောင်းကြားပါနော်။ ကိုညီလင်းသစ်တို့ မိသားစုလေးကိုလည်း စာထဲမှာလိုပဲ အပြင်မှာတွေ့ဆုံရင်းနှီးချင်ပါတယ်။ အသက်ခပ်ငယ်ငယ်က အဝေးကြီးကို သွားချင်တာ၊ ခုတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတော့ ပျော်တယ်မဟုတ်ပေမယ့် အမေနဲ့အမေ့အိမ်နဲ့ အနီးဆုံးနေရာလေးမှာ နေဖြစ်သွားတာ။ အမှန်အတိုင်းပြောရယင်
ကျွန်းသေးပြီး လူတွေအရမ်းများလာလို့ စိတ်ပျက်မိတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုသိပ်များတဲ့နိုင်ငံမှာ တစ်သက်လုံးနေဖို့တော့ မစဉ်းမိတာ ခုချိန်ထိပါပဲ။ စင်္ကာပူရောက် မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် အဆိုးအကောင်း ဒွန်တွဲနေတာကို လက်ခံပြီး ကျေနပ်အောင် ကြိုးစားနေသူထဲက တစ်ယောက်ပါ ကိုညီလင်းသစ်ရေ။
လာလည်မယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်မရွေး ကြိုဆိုပါတယ်။ လာလည်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့...း))
မြန်မာတွေအများကြီး မြန်မာလမ်းသီးသန့်နဲ့ မြန်မာအစားအစာ အစုံအလင်အတွက်ဆိုရင်တော့ ထိုင်ဝမ်ကျွန်းလေးကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျာ။
အပျင်းမကြီးတဲ့တနေ့တော့ မြန်မာလမ်းက စားဖွယ်ဆိုင်တွေအကြောင်း ပုံလေးတွေနဲ့ သရေယိုအောင် နှိပ်စက်ချင်သေးတယ် :)